किन झर्छ पुरुषको कपाल ? - दैनिक
किन झर्छ पुरुषको कपाल ?
स्वास्थ्य/जीवनशैली December 8, 2016
हिजोआज कपाल झर्ने समस्याले धेरै मानिस तनावमा पर्ने गरेका छन् । विशेषगरी पुरुष कपाल झर्ने समस्याबाट हैरान भएको पाइन्छ । धेरैको गुनासो हुन्छ, मेरो उमेर नै पुगेकै छैन कपाल झरेर केही बाँकी छैन । आखिर किन झर्छ पुरुषको कपाल ? यसका केही वैज्ञानिक यस्ता छन् ।
विभिन्न कारणले चाया पर्ने समस्या पुरुषमा पनि व्याप्त छ । लगातार चाया पर्ने तर समाधानको उपाय खोजिएन भने कपाल झार्न सक्छ ।